Friday, 8 Feb, 2019 12:07 PM
एस्टोनिया उत्तरी यूरोपमा पर्ने एउटा देश हो । यसको सीमा उत्तरमा फिनल्याडंको खाडि, पश्चिममा बाल्टिक सागर, दक्षिणमा लातविया र पूर्वमा रुससंग जोडिएको छ । यो देशमा समशीतोष्ण जलवायू पाइन्छ । एस्टोनियामा लोकतांत्रिक संसदिय प्रणाली छ र यो १५ राज्यमा विभाजित छ । यो देशको राजधानी ट्यालिन्न हो जुन एस्टोनियाको शहरहरु मध्यकै ठुलो शहर हो । यो देशमा जम्मा १.४ करोड जनसंख्या रहेको छ । यो इयूको सबैभन्दा कम जनसंख्या भएको देश हो । कम जनसंख्या भएपनि आइटी क्षेत्रमा गरेको यो देशको प्रगतिले भने सबैलाई लोभ्याएको छ । नेपालमा पनि मुलुकलाई प्रविधिमैत्री बनाउने विषयमा धेरै कुरा हुन्छन् तर व्यवहारमा भने त्यस्तो पाइदैन । पछिल्ला दिनमा प्रविधिको क्षेत्रमा केही आशालाग्दा कदम देखिएपनि सरकारी क्षेत्रबाट सूचना प्रविधि क्षेत्रलाई जसरी प्राथमिकता दिनुपर्ने थियो त्यसो हुन सकेको छैन । आज हामीले उत्तरी यूरोपको एउटा सानो देश तर प्रविधिमा विश्वमै अब्बल एस्टोनियाका केही विशेषता प्रस्तुत गरेका छौँ । आर्थिक रूपमा सम्पन्न रहेको यहाँको प्रविधि र त्यसको प्रयोग नेपाल जस्ता मुलुकका लागि ठुलो सिकाइ हुनसक्छ ।
१. विद्यालयमा प्रोग्रामिङ्ग
एस्टोनियामा स्कुलहरू प्रविधिमैत्री छन् । सानै उमेरबाट बालबालिकालाई प्रविधिसँग परिचित बनाउने उद्धेश्यले एस्टोनियाले सन २०१२ मा एउटा कार्यक्रम लञ्च गरेको थियो, जसको नाम थियो पाइलट प्रोजेक्ट । यो प्रोजेक्ट अन्र्तगत कक्षा एक देखि १२ कक्षासम्म विद्यार्थीलाई कम्प्युटर सिकाउन थाल्यो । यो कार्यक्रममा २० विद्यालयले भाग लिए । एस्टोनियामा बच्चाहरूले ६ वर्षको उमेरबाट नै Scratch visual programming environment अन्तर्गत गणित सिक्न शुरू गर्छन् । साथसाथै आफुले सिकेको गणितलाई कता प्रयोग गर्ने भनेर समेत सिक्छन् ।
२. इलेक्ट्रोनिक पासपोर्ट
सन् २००२ बाटनै एस्टोनियाले इलेक्ट्रोनिक आईडीको वितरण शुरु गर्यो । तिनीहरु हेर्दा कार्ड जस्तो देखिन्छन् र तिनीहरुले वास्तविक र डिजिटल वातावरणमा व्यक्तिगत विवरण पहिचान गर्छन् । कार्डमा प्रयोग गरिएको चिपमा नागरिकको जानकारी र इलेक्ट्रोनिक हस्ताक्षर हुन्छ जुन कानुनी रुपमा म्यानुअलको बराबर हुन्छ । यो कार्डमा विभिन्न कागजातहरू संलग्न गर्न सकिन्छ र यसले इयुको यात्रा गर्दा पासपोर्टको रुपमा पनि काम गर्दछ ।
३. घरबाट नै मतदान गर्न मिल्ने
सन् २००५, जब एस्टोनियामा नगरको चुनाव भयो,उक्त चुनावमा देशका नागरिकले घर बाटनै इलेक्ट्रोनिक आईडीबाट आफ्नो हस्ताक्षर पहिचान गराई मतदान गर्न सक्ने भए । विश्वमा सर्वप्रथम विद्युतिय मतदान गर्न शुरुगर्ने मुलुक एस्टोनिया नै हो । एस्टोनियाले सन् २००७ को संसदीय चुनावमा विद्युतिय मतदान शुरु गर्यो । युरोपियन संसदको चुनावमा ३१ प्रतिशत एस्टोनियाका नागरिकले यस प्रणालीबाट नै मतदान गरेका थिए ।
४. निशुल्क सार्वजनिक यातायात
सन् २०१३ मा, टालिनमा सबैको लागि निशुल्क सार्वजनिक यातायात सुविधा दिने विश्वको पहिलो शहर हो । यस कदमले देशका नागरिकलाई प्राइभेट कार छोडेर सार्वजनिक बस तथा ट्रलिबस तर्फ आकर्षित गर्यो । यातायात शुल्कलाई हटाउनुअघि एउटा जनमत संग्रह गरिएको थियो जसमा शहरका तिन चौथाई जनताले निशुल्क सार्वजनिक यातायातको लागि मतदान गरेका थिए । त्यसको ठिक एक वर्ष पछि, टालिनका अधिकारिहरुले यस कार्यक्रमले मुख्य सडकमा हुने गरेको ट्राफिकमा तिव्र रुपले कमी आएको घोषणा गरे ।
५. स्टार्ट अपको देश
तत्कालको डाटा अनुसार,एस्टोनिया प्रति व्यक्ति स्टार्टअप उच्चतम भएको युरोपको तेस्रो मुलुकमा परेको छ । यो मुलुकले स्टार्टअपको लागि मनपर्ने अवस्था सिर्जना गरेको छ । नयाँ व्यवसाय दर्ता १५ मिनटमा हुन्छ र त्यहाँ आयमा कुनै पनि किसिमको कर्पोरेट आयकर छैन ।
के तपाई घना जंगलमा इन्टरनेटको कल्पना गर्न सक्नुहुन्छ ? यो एस्टोनियामा सम्भव छ । एस्टोनियामा इन्टरनेट निशुल्क छ । जता गए पनि इन्टरनेट जोडिन्छ चाहे होटल होस वा सार्वजनिक स्थान जस्तै पार्क, गल्लि, क्याफे, रेस्टरेन्ट, रेल्वेस्टेसन, एयरपोर्ट वा वेन्च । यहाँ तपाई घना जंगलमा गएपनि इन्टरनेटकै पहुँचमा हुनुहुन्छ ।
७. जो कोहि एस्टोनियाको बासिन्दा हुन सक्छ
धेरै मेहनत नगरि नै एस्टोनियाको इ रेसिडेन्ट हुन जो कोहिले पनि सक्छ । यसले देशमा नबसि विभिन्न कार्य गर्न अवसर दिन्छ जस्तै नयाँ व्यवसाय शुरु गर्न, यात्रा गर्दागर्दै कम्पनी व्यवस्थापन गर्न, डकुमेन्टलाई सहि गर्न र कर भुक्तानी गर्न । यो सब अनलाईनबाट नै गर्न सकिन्छ । ई रेसिडेन्सिले मूख्यतया व्यापारीहरूलाई लाभदायक छ किनभने उनीहरूले निर्यातमा मात्र कर भुक्तान गर्नुपर्ने हुन्छ । इयु भन्दा बाहिरका व्यवसायीलाई यसले एस्टोनिया र इयुमा व्यवसाय सञ्चालन गर्न बाटो खोलिदिएको छ ।
अहिले एस्टोनियामा चार हजार भन्दा बढि सेवाहरू अनलाईनमा उपलव्ध छ चाहे त्यो कर भुक्तानिका लागि होस या रुख कटानको लागि अनुमति लिन होस । लगभग २० मिनेटमा, एस्टोनियाबासीले आफ्नो कार्डबाट नयाँ कम्पनी खोल्न सक्छन् । यो प्रविधिले गर्दा लाईन बस्नुपर्ने, पेपर कलेक्ट गर्ने, डकुमेन्ट, सहि, छाप जस्ता झन्झटबाट मुक्त छन् । जसले गर्दा यो समयलाई उनीहरुले आफ्नो परिवार संग बिताउन सक्छन् ।